Momba anay - Fujian Joborn Machinery Co., Ltd.
Fujian Joborn Machinery Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny "tanàna vato any Shina" -china, shuitou, dia mitazona faritra manodidina ny 60 hektara, miaraka amin'ny zavamaniry maoderina maherin'ny 20 000 metatra toradroa ary mihoatra ny 4000 metatra toradroa amin'ny tranon'ny fitantanana. fikarohana sy fampandrosoana, famokarana, varotra ary serivisy amin'ny iray amin'ireo mpanamboatra fitaovana famokarana vato. Nanangona harena maro niainana, teknolojia mahafinaritra ary serivisy manodidina ny halavirany dia manome antoka fa nahazo laza malaza eo amin'ny tsena ny orinasa.
Ny vokatra lehibe indrindra dia ny milina fanapahana tetezana SQC450 / 600 / 700-4D ,, masinina fanapahana tetezana eo afovoany SQC2200 / 2500 / 2800-4D milina fanapahana, SQ / PC-1300 milina famolavolana endrika manokana, SPG resin andian-tsarimihetsika mandeha ho azy milina sns. Ny kalitao voalohany dia ny tanjon'ny orinasanay dia nanangana Sampana fanaraha-maso kalitao matihanina ny orinasa, manana fitaovana fandrefesana fanandramana mandroso, dingam-pitsapana henjana, manomboka amin'ny fividianana akora hatramin'ny trano fitehirizam-bokin'ny vokatra; fehezina henjana ny fizotrany isan-karazany mba hahazoana antoka fa ambony ny vokatra vita.
Ny orinasa dia mitazona ny fanahin'ny "lohalaharana amin'ny olona, ​​mamonjy amin'ny kalitao, mandresy amin'ny alàlan'ny tarehimarika vaovao", amin'ny ho avy ny orinasa dia hanome matihanina ny teknolojia sy ny toe-tsaina manavao hatrany ny kalitaon'ny serivisy ho an'ny hery "manufacturing China. 2025 ", ho famerenana amin'ny laoniny ny famokarana fitaovana vato any Shina ary ezaka tsy misy fitsaharana.
JOBORN Masinina dia nanangana ekipa matihanina manana traikefa manan-karena amin'ny famokarana milina vato. Nandritra ny 20 taona mahery, fitaovana maherin'ny 60000 vato manamboatra traikefa manankarena sy fanangonan-karena teknolojia no nahatonga ny haitaonan'ny orinasa ho eo alohan'ireo mpiara-miasa aminy hatrany, mamorona tombony amin'ny haitao famokarana, ary manome taratra haingana ny teknolojia fanodinana vato farany sy ny filan'ny mpanjifa ny famokarana vokatra, fanaovana teknolojia sy vokatra lohalaharana amin'ny indostria.
Ny milina Joborn dia mitazona ny fanahin'ny fototr'orinasa "lohalaharana amin'ny olona, ​​mamonjy araka ny kalitao, mandresy amin'ny alàlan'ny isa vaovao, amin'ny isa vaovao". Raiso ho toy ny ivony ny fangatahan'ny mpanjifa, raiso ny fahafaham-po ho an'ny mpanjifa, miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny kilasy voalohany, ny teknolojia kilasy voalohany, ny toe-tsaina kilasy voalohany hahatratrarana "mihoatra ny andrasan'ny mpanjifa, mihoatra ny lasibatry ny indostria" tanjona kendrena, manome ny mpanjifa mialoha feno -mivarotra, mivarotra, ny fizotran'ny serivisy aorian'ny fivarotana.